Yaa u sabab ahaa inay Ciidanka Somalia u babac dhigaan weerarkii lagu soo qaaday Beled Xaawo? | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Yaa u sabab ahaa inay Ciidanka Somalia u babac dhigaan weerarkii lagu...
Yaa u sabab ahaa inay Ciidanka Somalia u babac dhigaan weerarkii lagu soo qaaday Beled Xaawo?
(Beled Xaawo) 25 Jan 2021 – Waxaa dagaal qaraar oo ka dhacay magaalada Beled Xaawo ku geeriyoodey dad ay ku jiraan 5 carruur ah oo hal qoys ah, waxaa sidoo kale dhintay Taliye Xigeenkii Booliiska magaalada Maxhamed Cabdi Nuur iyo ugu yaraan 11 qofood oo kale.
Ciidanka Federaalka oo markii hore qayb ka tirsan magaalada laga qabsaday ayaa markii dambe dib ula wareegey oo ka saaray malliishiyaadkii ay soo diyaarisay Kenya, kuwaasoo ay DF sheegtay inay qaar ka qabsatay ciidanka Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah DF.
Ciidanka DF ee Gor Gor ayaa la sheegayaa inay dib u xaqiijiyeen gacan ku haynta magaalada kaddib markii ay gurmad culus ka heleen Ciidanka Xoogga ee jooga magaalada Dooloow.
Waa markii 3-aad oo ay Ciidanka Somalia ay dhirbaaxo ku dhuftaan malliishiyaadka Janan oo ka gows haysta dalka Kenya oo saldhig iyo saanadba siiya.
Previous articleTurkiga oo qalabka lagu arko shucaaca laysarka iyo hub kale siiyey dal Yurub ah
Next articleKenya oo qoraal ay isugu ekaynayso mid u naxaysa shacabka Somalia soo saartay xilli muuqaallada ciidankii la qabtay lasoo bandhigay